ပေါ်တူဂီနာဇရက်မြို့ - အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ၏ဤအံ့ဖွယ်ရာကိုလည်ပတ်သည် ခရီးသွားသတင်း
တစ်ရာနှစ်ဆယ်ကီလိုမီတာမြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသည် လစ္စဘွန်း၏ပေါ်တူဂီမြို့ Nazaré ၎င်းသည်လူ ဦး ရေနည်းပါးသောကြောင့် ၀ င်ငွေအရင်းအမြစ်အဖြစ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်ငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုအစားထိုးခဲ့သည်။ ၎င်းသည်လှပသောသဲသောင်ပြင်များနှင့်လှိုင်းစီးဝင်ရန်အကောင်းဆုံးသောကြည်လင်သောရေများရှိသည်။ ထိုဒေသရှိအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာသည်ထိုအရာဟုခေါ်သည် နာဇရီချောက်ဒီအားကစားအတွက်လိုအပ်သောလှိုင်းလေထန်နှင့်အတူဒီရေကြောင်းareaရိယာကိုထောက်ပံ့ပေးသော။
ပေါ်တူဂီကျေးရွာသည်သင့်အားခမ်းနားထည်ဝါသောသဘာဝအတိုင်းလှပသောသဘာဝလှိုဏ်ဂူများနှင့်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများအပြင်နွေရာသီလများ၌စည်ကားလှပသောသဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်များကိုလည်းပေးထားသည်။
1.1 Alcobaçaနှင့် Batalha
2 Nazaré၏ gastronomy
ပေါ်တူဂီနာဇီရီးယားမြို့မှာသင့်ရဲ့အာရုံကိုဖမ်းစားနိုင်မယ့်ပထမ ဦး ဆုံးအရာကတော့သူ့ရဲ့အထင်ကြီးလောက်ဖွယ်ကမ်းခြေများဖြစ်သည်။ တူညီတဲ့မြို့ပြareaရိယာ၌ရှိ၏ Banhos ၏အလွန်ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ပွင့်လင်း။ အနီးရှိအရက်ဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ပြည့်နေသည့်တံငါသည်၏ခရိုင်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သို့သော်အလွန်အရေးကြီးသည်မှာ၎င်း၏ကျဉ်းမြောင်း။ မတ်စောက်သောလမ်းများနှင့်အဖြူရောင်ဖြူထားသောအိမ်များဖြစ်သည်။
မြို့၏အထက်ပိုင်းကို Sitio ဟုခေါ်သည် Suberco ၏အမြင်အမြင့်တစ်ရာ ၁၀ မီတာခန့်ရှိပြီး၎င်းသည်ပေါ်တူဂီကမ်းရိုးတန်းကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမြင်ကွင်းများကိုပေးသည်။ သင်တို့သည်လည်းပြုရန်တွန်းအားပေးသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် Sao Miguel Arcanjo ၏ခံတပ်၎င်း၏ဝိသေသမီးပြတိုက်နှင့်အတူ။
အတိအကျ site ပေါ်တွင်ဖြစ်ပါတယ် Nazaré၏ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်၏သန့်ရှင်းရာဌာန၁၇ ရာစုမှ Baroque ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည် Fatima ၏။ အတွင်းပိုင်းတွင်ပန်းချီကားများကိုအeight္ဌမနှင့်ဒတ်ချ် V. Van Kloet ၏လှပသောကြွေပြားများမှတွေ့နိုင်သည်။ ပေါ်တူဂီarchကရာဇ်များနေထိုင်သည့်တော် ၀ င်နန်းတော်နှင့်ဆေးရုံတို့မှာအခြားအဆောက်အအုံနှစ်ခုကဤဗိသုကာဆိုင်ရာအဆောက်အအုံကိုပြီးစီးစေသည်။
ဒီအစုံအနီး, သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့်ရှေးဟောင်းသုတေသနပြတိုက်ဆရာဝန် Joaquim Mansoနှစ်ဆယ်ရာစုအစောပိုင်းကနေနွေရာသီအိမ်တော်၌တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ပန်းပု၊ ပန်းချီနှင့်ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာတို့ကိုပေါင်းစပ်ထားသောသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောနေသောပြပွဲတစ်ခုကိုတင်ပြသည်။ သို့သော်အထူးစိတ် ၀ င်စားမှုသည်နာဇီအတိတ်နှင့်၎င်း၏ပြည်သူတို့၏ရှေးဟောင်းနယ်ပယ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
၁၆ နှင့် ၃၀ ကီလိုမီတာအသီးသီးရှိနာဇရက်နှင့်အလွန်နီးကပ်။ သမိုင်းနှင့်andရာမစိတ်ဝင်စားမှုများစွာရှိသောနေရာနှစ်နေရာကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကား၏ဒေသများဖြစ်ကြသည် Alcobaçaနှင့် Batalha.
ပထမမှာမင်းတွေ့လိမ့်မယ် Santa María de Alcobaça၏ဘုန်းကြီးကျောင်းယူနက်စကို၏အဆိုအရ ၁၁၄၈ ခုနှစ်တွင်ဘုရင်အယ်လ်ဖွန်ဆို ၁ မှတည်ထောင်ခဲ့သောစီတာစီယန်ဘုန်းကြီးကျောင်းသည်ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာဖြစ်သည်။ Moorish ဒြပ်စင်များရှိသော်လည်း၎င်း၏ဗိသုကာပုံစံမှာ Gothic ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ပေါ်တူဂီနိုင်ငံမှ Pedro I နှင့်သူ၏ချစ်မြတ်နိုးသူInés de Castro တို့၏အခြားarchကရာဇ်တို့၏သင်္ချိုင်းများဖြစ်သည်။ သူ၏ကြေကွဲဖွယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဇာတ်လမ်းသည်ဒဏ္legာရီတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုလူသိများသောပြဇာတ်ရေးဆရာများဖြစ်သော Luis Vélez de Guevara သို့မဟုတ် Alejandro Casona တို့ကပြဇာတ်ရုံသို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်ဒီ villa မှာ၊ မတူကွဲပြားတဲ့ဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပေမယ့်မင်းမှာမင်းမှာရှိတယ် အမျိုးသားဝိုင်ပြတိုက်ပေါ်တူဂီတွင်အပြည့်စုံဆုံးဖြစ်သည်။
ရန်အဖြစ် Batalha၎င်းတွင်အထင်ကြီးလောက်သောဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် San María da Vitoria၊ Manueline Gothic ပုံစံနှင့်ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ၏အကောင်းဆုံးဥပမာဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤareaရိယာသည်သဘာဝအံ့ဖွယ်ရာများကိုလည်းသင့်အားပေးသည် Grutas da Moeda၄၅ မီတာနက်သောဥမင်များနှင့်ကီလိုမီတာဝက်နီးပါးကျယ်ပြန့်စွာရှိသည်။
တံငါရွာတစ်ရွာအနေဖြင့်Nazaréသည်သင့်အားအံ့ဖွယ်ပင်လယ်စာများကိုကမ်းလှမ်းသည်။ သင့်ရဲ့မဆို လတ်ဆတ်သောငါးရိုးရိုးကင်သို့မဟုတ်ကင်ပေါ်တွင်ချက်ပြုတ်လျှင်၎င်းသည်တကယ့်ခဲဖွယ်စားဖွယ်ဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူပင်လယ်စာအကြောင်းလည်းပြောနိုင်သည်။ သို့သော်ပေါ်တူဂီမြို့သည်သင့်အားပုံမှန်ဟင်းလျာများလည်းပေးသည်။
သို့သော်အားလုံးနီးပါးသည်ပင်လယ်စာအပေါ်အခြေခံသည်။ ဒါဟာအမှုဖြစ်ပါတယ် မင်္ဂလာပါမတူကွဲပြားသောငါးများဖြင့်ပြုလုပ်သောစွပ်ပြုတ်၊ ၏ ထုံနှင့်အတူဆန် (လျှာ); ၏ massa က de peixe နှင့် açorda, ပင်လယ်စာဟင်းချိုသို့မဟုတ်နှစ်မျိုး ကွမ်းခြံကုန်း သို့မဟုတ်ပင်လယ်စာ casseroles ။ အချိုပွဲတွေအတွက်ကြိုးစားရမယ် ချိုမြိန် sardines, တာမာနှင့် nazarenes.
ပေါ်တူဂီနိုင်ငံနာဇရက်မြို့တွင် (a) ရှိသည် မြေထဲပင်လယ်ရာသီဥတုတစ်နှစ်ပတ်လုံးပျော့ပျောင်းသောအပူချိန်နှင့်အတူ။ သို့သော်သင်လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်မှာမေလမှအောက်တိုဘာလအထိဖြစ်သည်။ ဤကာလတွင် ၂၇ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်မပိုသောအပူချိန်သည်အလွန်သာယာသည်။ မိုးရေချိန်နည်းသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ကမ်းခြေကိုပျော်မွေ့နိုင်သည်။
ပေါ်တူဂီမြို့၌သတ်မှတ်ထားသည့်ရက်စွဲများနှင့် ပတ်သက်၍ စက်တင်ဘာ ၈ ရက်တွင်ထင်ရှားသည်။ ထိုနေ့ရက်သည်ဂုဏ်ပြုခံရသည် Nazaré၏ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်၏ပွဲတော် ထောင်နှင့်ချီသောလူများသည်ဘုရားဖူးသွားခြင်းကိုပြုလုပ်ကြပါသည်။ ဒီအထိမ်းအမှတ်ပွဲကို ၁၀ ရက်ကြာတဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ gastronomic ပွဲတော်များပါ ၀ င်သည်။
Nazaréသို့သွားရန်သင်၏ကားကိုမသုံးလိုပါကအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်တစ် ဦး အခြေခံအဖြစ်ယူလျှင် လစ္စဘွန်းလေယာဉ်ဖြင့်သင်ရနိုင်သည်၊ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ကျော်အနည်းငယ် သင့် ဦး တည်ရာသို့
ပေါ်တူဂီမီးရထားလမ်းကိုသုံးနိုင်သည်။ တိုင်းပြည်၏မြို့တော်မှရထားသည် ၃ နာရီနှင့်မိနစ် ၂၀ ကြာမြင့်ပြီးနာဇရက်သို့သွားသည်။ နေ့စဉ် ၃၈ ခုဆက်သွယ်မှုရှိသည်။ နံနက် ၅.၃၇ မှ စတင်၍ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ၄.၄၄ နာရီသာရှိသည်။
သို့သျောလညျး သင်ဘတ်စ်ကားစီးရန်ပိုစိတ်ဝင်စားသည်။ ၃၅ မိနစ်သာကြာပြီးစျေးလည်းသက်သာသည်။ အလားတူစွာတစ်နေ့လျှင်ဆက်သွယ်မှု ၃၈ လုံးရှိပြီးနံနက် ၈ နာရီတွင်ပထမဆုံးထွက်ခွာသွားသည်။ နောက်ဆုံးတစ်ခုသည်နေ့လည် ၂၀ တွင်ဖြစ်သည်။
Nazaré၌သင်၏အာရုံကိုဖမ်းမိမည့်ပထမ ဦး ဆုံးအရာမှာ၎င်းဖြစ်သည် quaint ကျက်သရေ။ ခရီးသွား town ည့်မြို့ဖြစ်သော်လည်းနိုင်ငံခြားသားများသည်ပေါ်တူဂီငါးဖမ်းရွာတွင်ရိုးရာအဝတ်အစားများဝတ်ဆင်ထားသည့်ဒေသခံများနှင့်ရောနှောနေကြသည်။
ဒါပေမယ့်ဖြစ်ကောင်းပေါ်တူဂီမြို့နှင့်ပတ်သက်။ အများဆုံးစပ်စုအချက်ကို၎င်း၏ကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင်ရှိပါတယ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးလှိုင်းတွေ။ စင်စစ်အားဖြင့်သူတို့သည်တစ်ခါတစ်ရံ ၁၀ ထပ်အဆောက်အအုံ၏အရွယ်အစားသို့ရောက်သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ပြောတာပါ «နာဇရက်၏လှိုင်းကြီး».
နောက်ဆုံးသင်ပြောမယ် ဒဏ္ဍာရီ ပေါ်တူဂီမြို့နာဇရက်မြို့၏အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုအခြေခံသည်။ သမင်တစ်ကောင်လိုက်ရှာရင်းလိုက်လံရှာဖွေနေစဉ်အရူး Don Fuas Roupinho သည်သူ၏မြင်းသည်ချောက်ကမ်းပါးသို့တည့်တည့်သွားနေသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်။ မလွှဲမရှောင်သာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသည့်အခါသူသည်မိမိကိုယ်ကိုအပျိုစင်ဘ ၀ သို့အပ်နှံခဲ့ပြီးသူမရှေ့တွင်ထင်ရှားပေါ်လွင်ကာမြင်းကိုခြေရာများဖြင့်ရပ်တန့်ခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ Roupinho ဟာဒီနေရာမှာချာ့ချ်တစ်ခုဆောက်ခဲ့တယ် မှတ်ဉာဏ်၏။ ၎င်းဝန်းကျင်တွင်ယနေ့နာဇီရွာဖြစ်သည့်ငါးဖမ်းရွာသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » နာဇီ၊ ပေါ်တူဂီ၏ရတနာ